Maxaad Ka Taqaanaa Afarta Ciyaaryahan Ee Uu Lionel Messi Diiday Inuu La Ciyaaro? | Laacib.net
Maxaad Ka Taqaanaa Afarta Ciyaaryahan Ee Uu Lionel Messi Diiday Inuu La Ciyaaro?
Shaki kuma jiro in Lionel Messi uu cod diidmad qayaxan ku leeyahay kooxda Barcelona iyo xulka Argentina, waana mid uu shaqeystay marka loo eego heerka uu ka gaaray kubada cagta.
Hadaba waxaan maanta eegeynaa afar ciyaaryahan uu Lionel Messi diiday inuu la ciyaaro.
Inkastoo weeraryahanka Atletico Madrid Griezmann weli lala xiriirinayo kooxda Barcelona, hadana warbaahinta isboortiga Spain ayaa isku raacday in saxiixiisa uu ishortaagay Lionel Messi iyo weliba inta badan xiddigaha kale ee waa weyn ee kooxda Barcelona.
Labo siyaabood ayuu Messi u diidan yahay in Griezmann uu Camp Nou, tan koowaad oo ah inuu aaminsan yahay inuusan ku habooneyn qaab ciyaareedka kooxda islamarkaana uu abuurayo dhibaato weerar halkii uu xal noqon lahaa.
Tan labaad waa qaabkii uu Griezmann ku diiday kooxda Barcelona xagaagii hore, iyadoo Blaugrana ay si weyn u dooneyso xiddiga Faransiiska ayuu xiisahooda u isticmaalay inuu ku helo qandaraas kordhin ay u sameysay Atletico, waxaana uu sameeyay dukumiintiri uu ku shaacinayo inuu iska diiday Barca oo uu doortay inuu sii joogo Atletico. Messi iyi asxaabtiis weli ma aysan ilaawin taas.
Xagaagii 2017 Barcelona waxa ay ku jirtay shaqaaqo xun, waxaa markii ka tagay Neymar oo heshiis rikoor u noqday dunida ugu wareegay kooxda Paris Saint-Germain, waxayna u baahnaayeen inay xoojiyaan weerarkooda.
Agaadimayaasha kooxda Barcelona waxa ay doonayeen inay soo iibsadaan xiddga Koobka Adduunka ku guuleystay ee Mesut Ozil laakiin Messi ayaa ka horyimid go’aankooda, wuxuu rabay in la keeno ciyaartoy uu si fiican u yaqaano sida Angel di Maria waana ay suurtogeli weysay.
Waxay taasi ku qasabtay Barcelona inay lacag aad u badan ku keento Philippe Coutinho oo u noqday saxiix deg deg ah.
3 – Moura Icardi
Lionel Messi ayaa ka shaqeeyay sidii uu weeraryahanja Inter Milan Icardi uga maqnaan lahaa xulka Argentina madaama aysan xiriir ah ka dhaxeynin.
Messi ayaa diiday inuu ka garab ciyaaro Icardi madaama uu saaxiibkisii ugu fiicnaa Maxi Lopez uu kala wareegay xaaskiisa Wanda. La Pulga ayaana diiday inuu la macaamilo shaqsi sidaas u qiyaameeyay saaxiibkiis.
Sannadii 2017 tababare Sampaoli ayaa arimaha kala cadeeyay isagoo sheegay in xulka uu yahay xulkiii Messi, waxayna taasi keentay in Icardi uusan u dheelin Argentina wax badan tan iyo markaas.
4- Marco Reus
Xagaagii 2017 Barcelona waxa ay rabtay xiddiga khadka dhexe ee Borussia Dortmund Marco Reus.
Awoodiisa farsamo ayaa soo jiidatay agaasimayaasha Barcelona laakiin waxay talo ka heleen xidiga kooxda Lionel Messi.
Messi aya auga digay in Reus uu u nugul yahay dhaawacyada, sida muuqatana Messi waxa uu saameyn weyn ku leeyahay Barcelona iyo Argentina.